Isaladi ye-avocti kunye ne-turkey ne-apple Ngethuba leeholide, nokuba ingaba yindwendwe enokuthobekileyo yentsapho okanye ngokuhlwa ngokukhawuleza kunye neendwendwe ezininzi, umbuzo uvela malunga nokutya kwezi ndwendwe. Ukuba udibana nabahlobo bakho kunye nezihlobo kwiimeko ezinjalo ngokukhawuleza, awufuni ukuphinda uziphindiselele, kwaye ngexesha elide unokuzisa kwitafile, kodwa uzonwabe kodwa sele udibankile. Ukuba kwenzeka ukuba u tyelele, wazi kwangaphambili oko uza kutyalwa, ngoko uya kuqonda oko kukubakho. Ngoko ke, iincwadi ezahlukeneyo zokupheka kunye neengcamango ezintsha zokufumana isaladi, ukutya okutya kunye nezitya ezifudumeleyo, ezibonakala rhoqo kwiiwebhusayithi ezifanelekileyo, zithandwa kakhulu ngoku. Ukuba ngaba ngabafundi bethu abaqhelekileyo, mhlawumbi uqaphele ukuba sizama yonke imihla ukuba silungiselele izitya ezintsha kwaye uthethe ngendlela yokwenza kube yinto elula kakhulu yokunisela. Apha kwaye ngoku phambi kokuba ufumane iresiphi entsha yesaladi ehlwabisayo kakhulu ye-avocado ene-turkey, ekulungiswe ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Ndikholelwe, ngokuqinisekileyo ukukholisa kokubili kunye neendwendwe zakho ngeentsikelelo zakho ezintle ezingaqhelekanga, ukukhanya kunye nokunyaniseka. Ukuba ukwesaba iikhalori, "ukukhwela" kwi-avocado, yitshintshe ngeentlobo ze-celery.
I-Turkey fillet 200 g
Isaladi eluhlaza 1 ibhamvu
Ioli yeoliyi 4 tbsp. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela isaladi udinga i-turkey fletlet ebilisiwe (cwina iifomthi emanzini abandayo, ufike emathunjini, wongeza ityuwa kunye nepepper ecoliweyo, upheke imizuzu engama-30), i-avocado, i-apula enomnandi neyomuncu, i-saladi kunye neoli yeoli.
Inyathelo 2 Amaqabunga e-Saladi ahlanjululwe kakuhle, anxiwe kwaye anqunywe.
Inyathelo lesi-3 Gweba i-apula kunye ne-avocado kwi-peel kunye nomxholo, uze uthathe iikhabhi.
Inyathelo 4 I-turkey fillet nayo igalelwe iikhabhi.
Inyathelo 5 Xhuma isaladi, i-apula, i-avocado, iifowuni kwaye ungeze ioli yeoli.
Inyathelo 6 Ngomnene ugxobhoze isaladi, yongeza ityuwa ukuze uyitye.
Isaladi, intlanzi kunye ne-avocado
Yintoni ekudibanisa umbala obomvu omoya ngexesha lehlobo lehlobo lehlobo
Awukwazi ukuvumela abantwana busika